Ý nghĩa hoa anh đào? Những điều cần biết về cây anh đào | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Đang Đọc: Ý nghĩa hoa anh đào? Những điều cần biết về cây anh đào | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Intyatyambo yeCherry yintyatyambo yesizwe yelizwe lelanga eliphumayo-eJapan. Le yintyatyambo entle kwaye inentsingiselo enkulu yokomfuziselo. Namhlanje, zikhuliswe kwinani lamanye amazwe afana neVietnam, iTaiwan, iKorea, njl. Ngoko ke zithini iimpawu kunye neentsingiselo zeentyatyambo ze-cherry? Liliphi ixesha leentyatyambo kunye nendlela yokukhulisa i-cherry eVietnam? Makhe sifumane ulwazi malunga nale ntyatyambo kwinqaku elingezantsi!
1 Imvelaphi yeentyatyambo zeecherry
2 Intsingiselo yentyatyambo yecherry
2.1 Ibali lecherry yaseJapan
2.2 Intsingiselo yeentyatyambo zeetsheri
3 Iimpawu zeentyatyambo zeCherry
4 Ngeliphi ixesha lonyaka apho iintyatyambo zeetsheri zidubula?
5 Ezinye iintlobo zeentyatyambo zaseJapan
6 Ungazikhulisa njani iintyatyambo zecherry eVietnam
7 Indlela yokunyamekela umthi we-cherry
Imvelaphi yeentyatyambo zeecherry
Igama lenzululwazi lomthi we cherry blossom yi Prunnus cerasoides D. Don, bengamalungu osapho lweRose (Rosacea). Igama lesiNgesi yiCherry blossom, kwaye igama lesiJapan nguSakura.
Imvelaphi yale ntyatyambo ivela eJapan, ke eli lizwe liphuma ilanga likwabizwa ngokuba “lilizwe leentyantyambo zecherry”. Namhlanje, le ntyatyambo isasazwe ngokubanzi kumazwe amaninzi emhlabeni jikelele njenge-United States, Vietnam, Korea, China, njl.
Ngenxa yommandla wemozulu efanayo neJapan, le ntyatyambo ikwakhuliswa kwiindawo ezininzi zaseKorea. EVietnam, i-cherries isasazwa ikakhulu kumaphondo asezintabeni ezisenyakatho kunye ne-Central Highlands. Ngokukodwa idume kakhulu ngeentyantyambo ze-cherry eDalat, ziyaziwa ngamanye amagama amaninzi afana ne-cherry apricot, i-cherry, i-apricot yasendle, njl. Ngenxa yeempawu zabo ezifanayo, abantu abaninzi bahlala bebhidanisa iintyatyambo ze-cherry.
EMelika, amacheri atyalwa eWashington DC njengesipho esivela kurhulumente waseJapan ngo 1912 kunye no 1956. Ukongeza, iJapan yanika iCanada olu hlobo lwentyatyambo yecherry kwaye yatyalwa eVancouver ngeminyaka yoo1930s.
Intsingiselo yentyatyambo yecherry
Ibali lecherry yaseJapan
Kukho amabali ambalwa malunga neentyatyambo zeetsheri eJapan ukusuka kwixesha elidlulileyo ukuza kuthi ga ngoku. Kodwa eyona idumileyo yintsomi yegama elithi Sakura. Kuthiwa “sakura” iphuma kwigama elithi “sakuya” egameni lothixo okhankanywe kwincwadi yembali “Imbali yamandulo” (Kojiki) yaseJapan – uthixokazi uKonohana-Sakuya-hime. Ngokwale ntsomi, lo thixokazi waba ngumntu wokuqala owatyala imbewu yomthi wamacherry kwiNtaba iFuji. Kamva, wayegqalwa njengothixokazi uSakura kwaye loo ntyatyambo yesakura nayo yayinobuhle obukhulu njengothixokazi.
Intsingiselo yeentyatyambo zeetsheri
IJapan ibisoloko idume ngophawu lwentyatyambo yecherry. Le ntyatyambo ineentsingiselo ezininzi ezilungileyo malunga nenkcubeko yaseJapan. Okokuqala, intsingiselo yentyatyambo yecherry yaseJapan luphawu lobuhle obukhethekileyo kwaye iba yintyatyambo yesizwe yeli lizwe. Ukuqhakaza entwasahlobo, zifanekisela ukutsha, uvuyo kunye nethemba eliphuphumayo. Kwangaxeshanye, ukukhankanya le ntyatyambo kukwamele ubuhle obuhle kodwa obusulungekileyo nobucekeceke babafazi baseAsia. Ngaphezu koko, zikwafanekisela ubuhle bexesha elifutshane lobutsha kunye nobomi.
Ngaphandle koko, intsingiselo yeentyatyambo zecherry ikwamele ubomi obunzulu. Umfanekiso wale ntyatyambo unomyalezo okhuthazayo wokuba “nakwezona meko zinzima kakhulu, abantu kusafuneka banganikezeli kwilishwa kodwa kufuneka bahlale bephakama, besiya kwikamva elihle”.
Ukongeza, le ntyatyambo intle ikwafanekisela inkcubeko yokuthobeka kunye nomonde. Yiyo loo nto iintyatyambo zecherry zihlala zisetyenziswa yiJapan njengezipho kwamanye amazwe ezinomyalezo wokufuna ukuhlala ngoxolo kunye nokuphuhlisa kunye.
Iimpawu zeentyatyambo zeCherry
Iintyatyambo zeCherry zizityalo ezinomthi kwaye zihlala zikhula. I-trunk imdaka, inamasebe amaninzi kunye namasebe, aneempawu ezinqabileyo, ngoko kulula ukuphuka. Ubungakanani bomthi bukhulu kakhulu, bunokufikelela kubude obumalunga ne-5-25m. Amagqabi aluhlaza mnyama, ovali, kwaye arhangqe emphethweni.
Imibala yeentyatyambo zaseJapan zimhlophe, zipinki okanye zibomvu. Isiqu seentyatyambo sithambile, malunga neentyatyambo ezi-3 ukuya kwezi-6 zidityaniswe ngokwamaqela, iqoqo ngalinye esebeni. Ukuba ujongisisa, uya kubona ukuba le ntyatyambo ineempawu ezingafaniyo nentyatyambo yethu yeepesika. Amagqabi anencam ezimaza, athambileyo angqukuva kwaye apakishwe ukusuka embindini ukuya ngaphandle. Le ntyatyambo inomaleko amaninzi eepetali xa kuthelekiswa neepesika zethu, kwaye ukwakheka kwayo kuyafana neerozi.
Umahluko womthi waseJapan wentyatyambo yentyatyambo kukuba iintyatyambo ziqhakaza ngokungalunganga, kodwa ngexesha lokuqhakaza, amagqabi ayawa, ngoko awuyi kubona amagqabi, kodwa ubone kuphela umbala oqaqambileyo wentyatyambo kwisibhakabhaka sonke.
Ngeliphi ixesha lonyaka apho iintyatyambo zeetsheri zidubula?
Ngeyiphi inyanga apho iintyatyambo zecherry yaseJapan zidubula? Ngokukodwa, le ntyatyambo ihlala ibonisa imibala emhlophe okanye eqaqambileyo epinki entwasahlobo, kwaye ngasekupheleni kukaMatshi-ekuqaleni kuka-Epreli lixesha apho ziya kuqhakaza ngobuhle nangokuqaqambileyo. Emva kwexesha le-7 – 15 iintsuku, iintyatyambo ezintle ze-cherry ziya kuqala ukubuna. Nangona kunjalo, kuxhomekeke kwiimeko zokusingqongileyo, imozulu kunye neentlobo ezahlukeneyo zeentyatyambo, ixesha lokuqhakaza kunye nexesha labo lokuphila lihlukile.
Ukususela ekupheleni kuka-Matshi ukuya kuMeyi, xa iJapan ingena kwixesha leentyatyambo ze-cherry, iminyhadala yeentyatyambo ze-cherry nayo ibanjwe ngeli xesha. Lo ngumthendeleko wemveli owenziwa kwilizwe lonke, kwaye ubizwa ngokuba yi “Hanami”. Eli gama liyindibaniselwano yamagama amabini athi “hana” elithetha intyatyambo, elithetha intyatyambo yecherry, kunye “mi” elithetha “ukubukela”, kudityaniswe negama elithi “Hanami” elithetha umnyhadala wokubukela iintyatyambo. Umthendeleko weHanami unembali ende, abantu baseJapan banemisebenzi emininzi ngexesha lomthendeleko njengokuhlala esikhepheni ukubukela iintyatyambo ze-cherry, ukubamba amaqela e-tea, iipikiniki kunye nokunandipha izitya ezikhethekileyo zokupheka, … Imikhosi Oku kuye kwakhanga abakhenkethi abangenakubalwa kubo bonke. ehlabathini lonke. Iindawo ezilungileyo zokubona iintyatyambo eTokyo, eOsaka naseKyoto.
Iintyatyambo zaseKorea ziyaqhakaza entwasahlobo, kodwa kuphakathi kuMatshi ukuya ekuqaleni kuka-Epreli. Umnyhadala wentyatyambo yaseKorea udla ngokubanjwa ngo-Epreli. Ukuba unethuba lokuya eKorea ngexesha leecherry, kungcono uze Thatha inxaxheba kwixesha lomnyhadala apha kube kanye, ngakumbi umnyhadala weentyatyambo kwiSiqithi saseJeju, eJinhae (kwiPhondo laseGyeongnam), iMarike yeHwagae (iPhondo laseGyeongnam), iYeouido (ikomkhulu leSeoul), iMoaksan Mountain (iPhondo laseJeonbuk),…
Ixesha leentyatyambo zeCherry eTaiwan lisuka ngoJanuwari ukuya kuAprili Ezinye zeendawo ezintle zokubukela iintyatyambo kule ndawo yiTaichung (Wuling Farm, Formosa Aboriginal Cultural Village), Taipei (Chiang Kai-shek Memorial Hall, Yangmingshan National Park), New Taipei ( I-Wulai Waterfall, iTempile yaseTianyuan), i-Alishan, iLanga Moon Lake, njl.
Kule mihla, ukuba ufuna ukubona iintyatyambo zecherry, akusekho mfuneko yokuba uye kude uye eJapan okanye eKorea. EVietnam, iintyatyambo zecherry zasentwasahlobo ziyaqhakaza ngasekupheleni kukaJanuwari-Februwari.Ingakumbi, kufuneka uze kuthabatha inxaxheba kumnyhadala weDa Lat cherry blossom oqhubeka ngeentsuku ezi-3 ekuqaleni kukaFebruwari. Ukongeza, Ungabona kwakhona iintyatyambo. kwezinye iindawo ezifana neSapa, Ha Giang, Moc Chau.
Ezinye iintlobo zeentyatyambo zaseJapan
Okwangoku, kukho iintlobo ezininzi zeentyantyambo ze-cherry, ukusuka kumahlathi e-cherry asendle akhuliswe kwaye akhuliswa kwiindidi ezininzi ezahlukeneyo, ezifanelekileyo kwindawo yokuhlala nganye eguqukayo. Nazi ezinye zeentlobo eziqhelekileyo:
+ Oshimasakura: Olu hlobo lwentyatyambo ye cherry idla ngokudubula xa amagqabi edubula, anevumba elimnandi. I-Oshimasakura zikwabizwa ngokuba yi-Sakura mochi ngenxa yokuba amagqabi abo emva kokuphela kwexesha leentyatyambo ahlala echolwa kwaye enongwe ngetyuwa ukwenza esonga ngaphandle kwamaqebengwana ashinyeneyo okanye atyiwe neebhola zerayisi ze-onigiri.
+ Edohigan: Ngokungafaniyo no-Oshimasakura, iintyatyambo ze-Edohigan cherry ziyadubula ngaphambi kokuba amagqabi ahlume. Umbala weepetali uya kutshintsha ngokuthe ngcembe ukusuka kumhlophe ukuya kumbala opinki.
+ Yamasakura: Elinye igama nguBach Son Sakura kwaye liyadubula xa amagqabi ehluma. Iintyatyambo zinevumba elimnandi ngakumbi kunezinye iintlobo zeentyatyambo zecherry. Ziza ngemibala emibini ephambili, ngokuqhelekileyo epinki ephaphathekileyo okanye emhlophe.
+ Kanhizakura: Ezi ntyatyambo zithanda imozulu epholileyo kwaye zidla ngokubizwa ngokuba yibell cherries kuba iintyatyambo zazo zihlala zijinga okwentsimbi. Iintyatyambo zi-single-petalid, zihlala zipinki mhlophe okanye zipinki emnyama. Le ntyatyambo ikwanefuthe lokufunxa ityuwa xa usitya okanye iti yasemanzini.
+ Ukumisa: Olu hlobo lweentyatyambo lukwabizwa ngokuba yiKeyama zakura (Mao Shan) kuba iintyatyambo kunye namagqabi ayo abonakaliswa ngokugqunywa kweenwele ezincinci. Iintyatyambo zikwatshintsha umbala ukusuka kumhlophe ukuya kopinki.
+ Oyamasakura: Xa kuthelekiswa neYamasakura, olu hlobo lwentyatyambo ye-cherry inamagqabi amakhulu kunye neentyantyambo, kunye nombala weentyatyambo zipinki emnyama. Ke ngoko, zikwabizwa ngokuba yiBeniyama zakura (Hong Son Sakura).
+ Someiyoshino: Olu luhlobo olukhethekileyo lwentyatyambo ye cherry kunye neyona ikhula ngokuqhelekileyo, ineempawu zomxube we-Edohigan kunye ne-Oshimasakura. Olu hlobo lwentyatyambo luya kuqhakaza ngaphambi kokuba amagqabi akhule, oko kukuthi, xa iintyatyambo zifa, amagqabi amatsha aya kuhluma. Kwiipetali kunye namagqabi amancinci agqunywe ngoluhlu lweenwele ezincinci. Iipetals zikhulu kunezinye kwaye zipinki. I-Someiyoshino inophawu lokukhula ngokukhawuleza kunye nophuhliso.
Ungazikhulisa njani iintyatyambo zecherry eVietnam
Okokuqala, kufuneka ukhethe kwaye uhluze imbewu ngononophelo. Imbewu kufuneka ingabinazifo, ifikelele imigangatho yomgangatho, iqinisekise ukuxhathisa okulungileyo kwaye ikhule ngokukhawuleza. Ngaloo ndlela, iintyatyambo ezintsha zikhula kakuhle kwaye iintyatyambo zidubula kakuhle.
Umthi wentyatyambo yecherry ayisosityalo esikhethiweyo, ngoko ke unokukhuliswa kwimihlaba eyahlukeneyo. Nangona kunjalo, umhlaba wokutyala kufuneka uqinisekise ukungena komoya kunye nokukhupha amanzi kakuhle kuba isityalo asikwazi ukumelana nokuzaliswa kwamanzi. Qaphela malunga neentsuku ezi-7-10 ngaphambi kokutyala, yomba umngxuma kwaye emva koko uchumise ngesichumisi esiphilayo kwaye ugcwalise umngxuma.
Emva kokuba uyilungisile imbewu, kufuneka unyange phambi kokutyala. Lfuka imbewu emanzini acocekileyo malunga neentsuku ezi-2, zicoce kwaye emva koko zifukame esantini malunga nenyanga okanye ngaphezulu ukuze imbewu iqhekeke.
Xa imbewu iqhekekile, ingahlwayelwa kumhlaba olungiselelwe ukutyala. Xa uhlwayela, qaphela ukubeka imbewu ngokuthe nkqo, indawo echongiweyo ijonge phezulu uze ugqume ngomhlaba obhityileyo malunga ne-1-2cm ngaphezulu. Umgama ofanelekileyo phakathi kwembewu umalunga ne-3-4cm.
Indlela yokunyamekela umthi we-cherry
Iindlela zokukhathalela umthi weCherry zilula kakhulu, zifuna nje ukunikela ingqalelo kwezinye iimeko zokusingqongileyo kunye neendlela ezincinci ezincinci. Izityalo ezidubulayo zifana nokuphola, zingatyalwa elangeni kodwa azikwazi ukumelana nobushushu obugqithisileyo namaqondo obushushu aphezulu. Ubushushu obufanelekileyo bokukhula kwesityalo bumalunga ne 10-22 degrees celcius, ngoko ke, ukuba umthi utyalwe ngaphandle ehlotyeni, kuyafuneka ukuba umthi ukhuseleke ekukhanyeni kwelanga. Umthi wecherry uphakathi kokuthanda ukufuma, ngoko awunakuphila xa ukhukulisekile ixesha elide. Nangona ithanda ukukhanya okupheleleyo, inokuhlala emthunzini ixesha elifutshane.
Xa zisanda kutyalwa, izityalo kufuneka zinkcenkceshelwe de umhlaba ongaphezulu wome phambi kokuba unkcenkceshelwe kwakhona. Ukuba umthi ukhule ngokuzinzileyo, nciphisa umthamo wokunkcenkceshela, malunga ne-3 – 5 iintsuku zokunkcenkceshela ixesha eli-1. Nika ingqalelo kumlinganiselo ofanelekileyo wamanzi, musa ukunkcenkceshela kakhulu, kubangela ukuba isityalo sibe namanzi kwaye sife.
Malunga nenyanga eyi-1 emva kokutyala, umthi uqala ukukhula iingcambu ezintsha, emva koko unokufakwa ngomxube we-NPK yesichumisi kunye ne-urea ukunkcenkceshela ingcambu. Emva koko, sebenzisa amaxesha ama-5 ngokuqhubekayo, ixesha ngalinye malunga neentsuku ezingama-30 ngokuhlukana. Emva kokuba iintyatyambo zibunile, cima amasebe anzulu, amagqabi abunileyo, kwaye emva koko ufake i-NPK kunye nezichumisi zendalo emthini ukuze uphinde ukhule kwaye ukhule.
Ngexesha elifanayo, inkqubo yokunyamekela kufuneka ihlawule ingqalelo ekucoceni ingca, i-rooting kunye nokuthena iintyatyambo. Emva kokutyala malunga neenyanga ezi-2, susa onke amagqabi ukuze isityalo sigxile kwizondlo ukunceda iintyatyambo ziqhakaze zibe nkulu kwaye zihle kakhulu. Kuyenzeka ukuba ucinezele phezulu xa amagqabi amalunga ne-30-35cm ukuphakama, kuphela kude kube sekupheleni kukaJulayi, emva koko uqhubeke nokuthena ukubumba umthi.
Umthi otyatyambileyo wecherry unamandla awomeleleyo kwaye awuchaphazeleki kakhulu zizinambuzane kunye nezifo. Nangona kunjalo, kusafuneka kuthathwe amanyathelo okuthintela kunye nokususa izinambuzane ezitshabalalisayo ukuze zikhule kakuhle kwaye zikhule ngokutshiza ngokutshabalalisa izinambuzane. Ukongeza, jonga rhoqo ngexesha lokhathalelo ukubona ngokukhawuleza iimpawu ezingaqhelekanga kwaye uthathe amanyathelo asebenzayo okuthintela.
Ngaloo ndlela, i-cherry blossom yintyatyambo enhle enentsingiselo ekhethekileyo. Kukho abantu abaninzi abanqwenela ukuba nethuba lokuncoma le ntyatyambo kwilizwe lelanga eliphumayo okanye bathathe inxaxheba kumnyhadala wentyatyambo yeentyatyambo rhoqo entwasahlobo. Nangona kunjalo, ukuqonda ngokupheleleyo le ntyatyambo, kungekhona wonke umntu owaziyo. Ngaphezulu kulo lonke ulwazi oludingayo ukuyazi malunga nama-cherry, ngethemba lokuba iya kukunceda.
>> Bona ngakumbi: Intsingiselo, iimpawu kunye nendlela yokutyala nokunyamekela imithi yeepesika kwiholide yeTet